Scotland ga -eme ntuli aka nke abụọ maka nnwere onwe pụọ na UK na 2023
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbaji Scotland » Scotland ga -eme ntuli aka nke abụọ maka nnwere onwe pụọ na UK na 2023
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbaji Scotland • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ọgbakọ ọgbakọ ndị Scottish akwadola atụmatụ gọọmentị Scottish maka oge ịme ntuli aka nnwere onwe ọzọ na "mbido" oge enwere ike mgbe nsogbu COVID-19 gasịrị.
Onye ozi nke mbụ nke Scotland chọrọ ntuli aka nke nnwere onwe nke abụọ.
Ntuli aka nke abụọ nke ndị Scotland ga -eme na njedebe nke 2023.
A ga-eme Referendum n'oge enwere ike mgbe nsogbu COVID-19 gasịrị.
N'okwu e nyere ọgbakọ Scottish National Party (SNP) n'oge mgbụsị akwụkwọ taa, Mịnịsta Mbụ nke Scotland Nicola Sturgeon kwupụtara na ndị otu ya na -ezube ịme ntuli aka iwu ọzọ maka nnwere onwe pụọ na United Kingdom.
Onye minista mbụ nke Scotland Nicola Sturgeon kwupụtara na ndị otu ya na -ezube ịme ntuli aka iwu ọzọ maka nnwere onwe pụọ na United Kingdom.
Sturgeon kwuru na nke abụọ Ntuli aka nnwere onwe nke ndị Scotland ga-eme na njedebe nke 2023 ma ọ bụrụ na a na-achịkwa oria ojoo COVID-19, ma rịọ gọọmentị Britain ka ọ kwenye na ya "na mmụọ imekọ ihe ọnụ".
Dị ka Sturgeon si kwuo, ndị nọ na Scotland họpụtara ọgbakọ omebe iwu ọhụrụ nke Scottish na Mee, nke nwere "oke ma doo anya nke ukwuu maka ntuli aka nnwere onwe".
“Ka anyị na -apụta site na ọrịa na -efe efe, a ga -eme mkpebi ndị ga -akpụzi Scotland ruo ọtụtụ iri afọ na -abịanụ. Ya mere, anyị ga -ekpebi. Onye kwesịrị ime mkpebi ndị a: ndị mmadụ nọ na Scotland ma ọ bụ gọọmentị anyị anaghị votu na Westminster. Nke ahụ bụ nhọrọ anyị bu n'obi inye ndị Scottish na ntuli aka nke iwu n'ime oge omebe iwu a - COVID na -enye ohere, na njedebe nke 2023, "ka o kwuru n'okwu ahụ.
Sturgeon gbakwụnyere na "ọ bụghị ọchịchị Westminster nke nwere naanị ndị omeiwu isii na Scotland ikpebi ọdịnihu anyị na -enweghị nkwenye ndị bi ebe a."
Sturgeon kwuru na ọ gaghị 'edobe oke ọkwa ọrịa' maka mgbe ntuli aka nwere ike ime - "mana ị ga -achọ ịhụ ka ọnọdụ COVID na -achịkwa".
The Ndị Nlekọta Scottish ogbako akwadola atụmatụ gọọmentị Scottish maka oge ịme ntuli aka nnwere onwe ọzọ na "mbido" oge enwere ike mgbe nsogbu COVID-19 gasịrị.
Ndị otu ahụ kwuru na ekwesịrị ikpebi ụbọchị ahụ site na “ụkpụrụ nke data na-akwali” banyere mgbe nsogbu ahụike ọha kwụsịrị.
Emere ntuli aka nnwere onwe nke ndị Scotland na 2014, mgbe pasent 55 ndị ​​ntuli aka kwadoro ịnọ na Britain. N'oge na -adịghị anya ka ndị otu Sturgeon nwetere mmeri nke anọ na -esochi na ntuli aka ndị omeiwu Scottish na Mee, o kwere nkwa ịkwaga maka ntuli aka nnwere onwe nke abụọ mgbe nsogbu oria ojoo gafere.
Praịm Mịnịsta mba Britain bụ Boris Johnson ekwuola na ya agaghị akwado ntuliaka nnwere onwe nke abụọ.